नेपाल आईडलको दोस्रो संस्करण सुरुहुदै ! काहाँ बाट कहिले हुदैछ सुरु ? जानकारी लिनुहोस ... - E ALL NEPAL
नेपाल आईडलको दोस्रो संस्करण सुरुहुदै ! काहाँ बाट कहिले हुदैछ सुरु ? जानकारी लिनुहोस …
काठमाडौं । अन्तरास्ट्रिय फ्रेन्चाईज टेलिभिजन रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल’ पहिलो सिजनको सफलतापछि यसको दोश्रो सिजन पनि हुने भएको छ ।
केही समय अघि दोश्रो सिजन घोषणा गरेको एपिवान टेलिभिजनले भर्खरै अडिसन मिति र स्थान पनि सार्बजनिक गरेको छ । देशका कुना कुनामा बसेर आफ्नो गायन कलालाई तिखार्दै बसेकाहरुको लागि यो निकै ठूलो अवसर र स्थान बनेर आएको छ ।
Previous article सधै खुशी हुन्छन यी महिनामा विवाह गर्ने दम्पति
Next article पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपाल आए सँगै भारतलाई लाग्दै छ ठूलै झटारो ! यस्ता छन कार्यक्रम ...